लामो समयदेखि क्रान्त्किारी आन्दोलनमा लाग्नु भएका नयन सिंह भण्डारी आज हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुुनुहुन्छ, उहाँलाई क. अध्यक्षवाट टिका लगाउने कार्यक्रम छ…।’ कार्यक्रमको सुरुमै उद्घोषक कामरेडले भनिन् ।
‘कामरेड म आज आफ्नै घरमा फर्केको छु…’ हलका दर्शक तर्फ हेर्दै कामरेडले लालसलाम ठोके ।’
‘कामरेड म प्रदेश नं ७ को रिपोर्टिङ गर्न तपाईहरूको बीचमा आएको छु यो प्रदेशमा हामीले हिजोको हैसियत गुमाएका छौँ । तर, केही दिन यता तुलनात्मक सुधार हुँदैछ’ कामरेड राकेशले रिर्पोट राखे ।
‘हामीले हिजो सहायक आधार इलाका भनेका ठाउँहरू राम्रोसँग जोगाउन सकेनौँ, हामी मत परिणाममा दोश्रोमा परेका छौँ । तथापि आत्तिइहाल्नु पर्दैन कमरेडहरू’ प्रदेश नं ६ का कमरेड अपारले रिर्पाेटिङ गरे ।
‘हाम्रो प्रदेशको अपेक्षा अनुसार परिणाम आएको त होइन तर निकै तल पुगेको पनि होइन । निर्वाचनका विषय त आ– आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर यतिबेला यो चुनावी तालमेल र पार्टी एकता संयोजन समितिको घोषणाले त तरङ्गै ल्याएको छ कमरेडहरू । तपाईहरू धेरैलाई यस्तै लागेको होला तर हामी क्रान्तिकारीहरू अस्वभाविकतालाई स्वभाविक बनाएर पचाउन सक्छौँ अहिले पनि त्यहि हो…’ प्रदेश नं ५ को रिपोर्टीङ गर्दै कमरेड अनन्तले भने ।
‘यो प्रदेश सबै हिसाबले कमजोर देखिएको छ कमरेडहरू, हामी दुश्मन झैँ खेल्न र चलाख हुन जानेनौँ । हामी कतै अल्झियौँ वा धर्मरियौँ । घटनाक्रमले यहि भन्छ कामरेडहरू… एउटाले सहमति मानेन्, अर्को शक्तिले हामीलाई पुछेन् । नेतृत्व हुनुको नाताले सो प्रदेशका तर्फबाट म आत्मालोचित छु, कमरेडहरू । तर, मैले यहाँ केही उठेका कुरा राख्नै पर्दछ । अप्रत्यासित रुपमा आएको तालमेल र एकताको प्रस्ताव उपर व्यवहारदेखि सैद्धान्तिक र बैचारिक प्रश्न आएका छन् । विधि र प्रक्रियाका प्रश्न पनि उठेका छन् । यी प्रश्न हामीले समाधान गर्नै पर्दछ…’ प्रदेश नं ४ को रिपोटिङ गर्दै क. कान्छा बहादुरले कुरो राखे ।
‘हामी–हामी बीचको आफ्नै एकता प्रक्रिया पुरा नगर्दै स्थानीय चुनावमा गइहाल्यौँ । परिणाम प्रत्याशित आएन । तर, धेरै ठाउँमा प्रमुख प्रतिद्धन्द्धीका रुपमा पुग्यौँ । मतलाई आधार मान्दा धेरै तल गइहाल्यौँ भन्ने लागेको छैन् । भद्रगोल संगठनका बीच यहाँ भन्दा बढी के नै हुन सक्थ्यो र ? जहाँसम्म पछिल्लो प्रस्तावको कुरो छ, समाजवादको आधार निर्माण तथा क्रान्तिको नयाँ सिद्धान्त विकासका लागि यो आवश्यक छ र अपरिहार्य बन्यो भन्ने नै मुल ठम्याइ छ… ?’ प्रदेश नं ३ का इन्चार्ज क. सुमनको संक्षिप्त रिपोर्टिङ थियो ।
‘हामी मधेशमा जत्ति परिणाम ल्याउनुपथ्र्यो सकेनौँ, १३ वटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका जिते पनि म सन्तुष्ट छैन । पार्टीभित्रै पार्टी हुने र एकले अर्कोलाई हराउने रोग बलियो थियो । कतिपय कुरा माथि–माथि गासिने गरेका छन् । तालमेल र एकताको कुरा गर्दा हामी सबैले भूईंचालो आएजस्तो ठानेको हो । क. विश्वासमाथि विश्वास हुँदाहुँदै पनि घरीघरी उहाँ लम्पसार पर्ने र समपर्णमा जाने हो की भन्ने चिन्ता हुने गर्छ मलाई । अहिले पनि अर्कैको टिकेशमा जानुपर्ने हो की भन्दा भन्दै ठिक ठाउँमा ल्यायौँ भन्ने लागेको छ । पछाडीको सेनालाई नहेरी हिड्दा कमाण्डर मारिन सक्छ भन्ने कुरो हाम्रो बडेदाजुले बुझ्न पर्छ… ।’ क. रामसिहंले प्रदेश नं २ को रिर्पाेटिङ राखे ।
‘हाम्रो प्रदेश नं १ मा ९ वटा मात्र पालिका जित्यौँ । तर, अहिले धेरै सकारात्मक भएको छ स्थिति । विचार र दर्शन अनि सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिएर एकता गर्नुको अर्थ छैन भन्ने धेरै कमरेडहरूको सुझाव छ । ‘माओवाद र पहिचानको मुद्धा’ अगाडि सारेर क. इन्चार्ज साइलाले मत सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । एकता हुँदा धेरै कमरेडले मान्नु होला, विलय चाँहि हुँदैन भन्नुभएको छ, कामरेडहरूले…!’ प्रदेश नं १ को रिपोर्टिङ गर्दै संयोजक क. समरले कुरो राखे ।
‘हामी यतिबेला दुई मोर्चामा भएजस्तो देखिएका छौँ । यो हाम्रो विशेषता नै हो । तरङ्ग ल्याउन सक्नु नै हाम्रो तागत हो । यतिबेला हामीले नयाँ प्रकारको तरङ्ग फ्याकेका छौँ । राजनैतिक परिस्थिति अनुकुल बनाइरहने हाम्रो प्रयास अनुरुप नै त्यो सबै भएको हो…’ सरकारको मोर्चामा नेतृत्व गर्ने कमरेड अमरसिंहले कुरो राखे ।
‘हामी आफैले महाभूकम्प निम्त्याएका हौं । नयाँ निर्माणका लागि हो यो । यहाँ असाधारण चुनौती र असाधारण अवसर आएको छ र सँगसँगै असाधारण खतरा पनि मोलिएको छ । उसको हामी करण होइन् र हाम्रो ‘उ’ करण पनि होइन । निल्ने होइन रुपान्तरण गर्ने हो । विघटनको खराबीबाट नयाँ बनाउने हो…’ क. बादलले प्रशिक्षण दिए ।
‘भूकम्प आफैँमा प्राकृतिक भए जस्तै यो घटना पनि अस्वभाविक होइन । रातमा आएजस्तो भएकाले अलिक बढी डर भएको र छामछुम गर्नुपरेको जस्तो भयो । समाजवादी क्रान्तिको आधार तय गर्नका लागि एकिकृत पार्टी निर्माणको प्रयास मात्र हो । कसैले कसैलाई सिध्याउन होइन, सबैले सबैलाई बनाउन नै हो…’ क. प्रकाशले प्रस्ट पार्न खोजे ।
‘यो प्रक्रिया अचम्मसँग भएजस्तो मान्नुभएको छ..’ कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । हामीले गर्न बाँकी रहेको पुराना काम एक्लै नसक्ने भयौँ त्यसैले आवश्यकताको कसीमा यस्तो निर्णय हुन पुगेको हो । विधि, विधान र प्रक्रिया पक्कै नपुगेको हो तर सहि कामका लागि साना मसिना कुरा नकोट्याउँ भो अब । हामी कमजोर भएर होइन आत्माबल र मनोबल बढेको बेला नै यो महत्वपूर्ण निर्णय भएको हो । समाजवादको मुल मिशनमा सहमति भएर बहस बढाउँदै अघि बढ्न संयोजन समिति गठन भएको हो । कसैको कसैमा विलय पनि होइन र सोच्न पनि हुँदैन बरु नयाँ आधारमा नयाँ एकताको हाम्रो नियमित यात्राको नयाँ फड्को मात्र हो । यो समाजवाद तर्फको यात्रा नै भनेर बुझ्नुस्…’ कामरेड निर्माणले विश्वास दिलाउन खोजे ।
‘बुढाहरू कति…भएछन्..गाँठे ! …समाजवादकै लागि एकता गरेको रे ! त्यसै हो भने त खोइ…।’ प्रशिक्षण हलको एउटा कुनामा दुई–तीन जनाको खासखुस चलेकै बेला गडगडाहट ताली बज्यो…’ पोलिटब्यूरोको बैठक समापन भयो । एकताको प्रस्ताव अनुमोदन भयो ।